Canon EOS-1V: Igwefoto analog ahụ na-akwụsị ire ere | Akụkọ akụrụngwa
Analog foto na-ewe isi kụrụ si Canon. N'ihi na ụlọ ọrụ ekwuputala na ha ga-akwụsị ire EOS-1v, igwefoto analog ha kachasị ọhụrụ. Ihe nlere a rutere n'ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ gara aga, mana mmepụta ya kwụsịrị na 2010. N'ime afọ asatọ a, ụlọ ọrụ ahụ na-ere ngwaahịa ha gbakọtara. Ma nke a na-abịa na njedebe.
Ọ bụ ya mere, Canon akwụsịlarị ire ihe nlereanya a na gburugburu ụwa. Nke a mara ọkwa site na ụlọ ọrụ Japan n'onwe ya. Oge dị mkpa maka ụwa nke foto analog, nke na-ahụ otu n'ime kamera kachasị ama ama na-apụ n'anya.
Igwefoto a, Canon EOS-1V, A na-ahụkarị dị ka nke kachasị ọsọ na mpaghara ahịa a. Ọ nwere ikike ịgba ihe ruru 10 okirikiri kwa sekọnd ma jiri analog ana-eji echekwa ọdịnaya niile. Igwefoto gbara ọsọ n'ụdị Nikon, nke a ka na-ere taa.
Maka ndị ọrụ nwere igwefoto a, enwere ozi ọma ma ọ dịkarịa ala. Ebe ọ bụ na Canon ekwuola na ndị nwe ụdị a ga-enwe ike ịga n'ihu na-anata rụkwaa ya ma kwado ya ruo Ọktọba 31, 2025. N'ụzọ dị otú a, a ga-echebe ha maka afọ ole na ole.
Ọ bụ ezie na ha kwuru, ọ ga-ekwe omume na Enwere arịrịọ ndị a na-agọnahụ dịka nke 2020. Mana ụlọ ọrụ Japan ekwupụtaghị ihe kpatara enwere ike ịjụ ụfọdụ arịrịọ. Ya mere, anyị nwere olile anya ịmatakwu banyere nke a n'oge na-adịghị anya. Maka na obu ihe di nkpa.
Ihe ncheta Canon banyere EOS-1V a na-egbochi mmachi igwefoto analog na ahịa. A ka nwere ụdị Nikon dị na ahịa. Ọ bụ ezie na amabeghị ogologo oge ha ga-adị na ụlọ ahịa. Ihe ezi uche dị na ya bụ na oge na-abịa mgbe ha niile na-akwụsị ire. Ajụjụ bụ mgbe nke a ga-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Canon na-akwụsị ire igwefoto analog ya kachasị ọhụrụ
Spotify kwadoro azụ amụma ịkpọasị asị
Logitech weputara ohuru ohuru maka ndi gamers, Logitech G305